प्रदीप बस्नेत काठमाडाैं, १३ पुस
पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता समकालीन राजनीतिमा इमानदार नेताका रूपमा चिनिन्छन् । भर्खरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बाहिरिएका पण्डित राजनीति जनताका लागि हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । आर्थिक रूपमा पारदर्शिता कायम राख्न सकेका कारण आफूलाई सबैले मन पराएको उनको बुझाइ छ । पहिलोपटक सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डित राष्ट्रसेवक कर्मचारीले डीभी र पीआर लिन नहुने भन्दै त्यस्ता कर्मचारीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा प्रधानन्त्रीले राम्रो परफर्मेन्स दिन नसकेको भन्दै उनलाई हटाएका थिए । उनै पण्डितसँग मन्त्रीको कार्यानुभव, काम गर्न नसक्नाको कारणलगायत विषयमा शिलापत्रकर्मी प्रदीप बस्नेतले कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादति अंशः
भर्खरै मन्त्रीबाट निवर्तमान हुनुभएको छ, कसरी दिन बितिरहेको छ ?
सामान्य रूपमा नै बितिरहेको छ । मन्त्री नरहे पनि जनताको प्रतिनिधि भएकाले राजनीतिक गतिविधिमै ब्यस्त छु ।
लालबाबु पण्डितप्रति आममान्छेमा एक तहको सम्मान र श्रद्धा छ । सार्वजनिक रूपमा भेटिँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ ?
मेरो विगत ४० वर्षदेखिको राजनीतिक जीवनमा आफूलाई जनताभन्दा फरक हुँ भन्ने कहिल्यै ठानिनँ । जनताले प्रयोग गर्ने साधन नै मैलै प्रयोग गर्दै आएँ । समयअनुसार भूमिकामा रहँदा केही फरक भयो होला । नत्र आजको दिनसम्म म तल्लो तहको जनताभन्दा केही फरक छैन । पहिलो पटक सांसद हुँदा ६ महिनापछि मात्रै डेरा लिएको हुँ । काठमाडौंमा हुँदा धेरैजसो म पार्टी कार्यालयमै सुतें । दिनभर राजनीतिक काम, सुत्ने बेलामा पार्टी कार्यालयमा मेरो बास हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताको घरमा पनि बसें । अहिले पनि विराटनगरमा मेरो सानो घर छ । काठमाडौंमा डेरा बस्न थालेको ४० वर्ष हुन थाल्यो । पहिलो पटक मन्त्री हुँदा डेरा राखेर गएको थिएँ । तर, यसपालि भने डेरा छोडेर मन्त्री क्वार्टर गएको हुँ ।
पूवमन्त्रीले डेरा पाएनन् । डेरा खोज्नै मुश्किल भयो भन्ने पनि आएको थियो । डेरा खोज्न साँच्चै समस्या भएको थियो तपाईंंलाई ?
पहिलो पटक मन्त्री हुँदा डेरा थियो र समस्या भएन । यसपालि भने केही गाह्रो त भयो । पहिलो पटक डेरा नछोड्दा सामान सबै बिग्रिएको थियो । केही सामान मुसाले काटेर बिगारिदिएछ । यसपालि भने सामान सबै लगेर मन्त्री क्वार्टरको एउटा कोठमा थन्क्याएको थिएँ ।
मन्त्रीबाट हटेको खबर राति थाहा पाएँ । मन्त्रीबाट हटेपछि एकछिन पनि क्वार्टरमा बसौंजस्तो लागेन । र, राति १२ बजेदेखि नै डेरा खोज्न साथीहरूलाई भनें । केही साथीहरूले आफ्नै घरमा बसेर बिस्तारै डेरा खोज्दा पनि हुन्छ भनेर ढाडस पनि दिए । सार्वजनिक सावारीसाधन पाइने, पैदल हिँडेर भए पनि सिंहदरबार संसदभवन जान मिल्ने ठाउँ चाहिएको थियो । डेरा खोज्न हामीजस्तोलाई गाह्रो नै हुन्छ । भनेको जस्तो र घरबेटी पनि सहज चाहिने भएपछि डेरा खोज्न गाह्रो भइहाल्छ नि । अहिले बसिरहेको कोटेश्वरको डेरा तुलनात्मक रूपमा सहज छ ।
तपाईंं कुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म सँग कुनै साधन छैन । सार्वजनिक गाडी नै चढ्छु । आवश्यकताअनुसार ट्याक्सी, स्कुटर या मोटरसाइकलमा लिफ्ट माग्छु । निजी सचिवको मोटरसाइकल चढ्छु । सेक्युरिटी पनि मोटरसाइकलमा पछिपछि आउँछन् ।
तपाईंं दुईदुई पटक मन्त्री भएको मान्छे, सत्तारुढ दलको नेता, सांसद, मन्त्री भएर पनि काठमाडौंमा ससानो घरको व्यवस्था गर्न नसकिने हो ? नेताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पनि हो नि ?
इमानदार हुने हो भने जोहो गर्न नसकिने हो । बेइमानीको कुनै सीमा हुँदैन । मैलेचाहिँ अहिलेसम्म घरको जोहो गर्न सकिनँ ।
आवश्यकता महसुस हुन्छ ? ठूलै बंगला नभए पनि ससानो घर हुनु अन्यथा पनि त होइन नि ?
आवश्यकता महसुस त हुन्छ । नहुँदाखेरीको पीडा, डेरा खोज्न जाँदा कतिपयले अपमान गरेका पीडा, घर हुनेसँग गरिने व्यवहार र नहुनेसँग गरिने व्यवहार फरक हुन्छ । तर, सबै कुरा कहाँ पूरा हुन्छ र ?
कतिपयलाई यस्तो पनि हुँदो हो । राजनीति गर्नका निम्ति नैतिक मूल्यमान्यता, पारदर्शिता आदि कुराहरू आदर्शका रूपमा लिइन्छ । यी चिजको खडेरी परेको बेलामा तपाईंंजस्ता केही व्यक्तिहरूले मात्रै आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिञ्जेल टिकाइराख्न सक्नुहोला ?
यो कुरा बुझ्नेका निम्ति आदर्श पनि हो । घर हुने कतिपयले सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउनका लागि भौतिक साधन आवश्यक पनि होला । तर, मलाई यी कुराले लोभ्याएन । साथीहरू पनि एउटा घर, एउटा गाडी त चाहिन्छ भन्नुहुन्छ । तर, म जनताभन्दा धेरै पर पुर्‍याउन चाहन्नँ ।
तपाईंंको पार्टीका अधिकांश नेताहरूको घर छ । एक पटक मन्त्री भइसकेपछि त घर गाडी त सामान्य नै देखिन्छ नि ?
अपारदर्शी केही काम गर्नु हुँदैन । विलासिता र आवश्यकताको कुनै सीमा र गति हुँदैन । मन कहाँ कति दौडिन्छ, यसको कुनै सीमा हुँदैन । यथार्थ स्थितिबाट जहाँ पुग्न सकिन्छ, त्यहाँसम्मको यात्रा तय गर्नुपर्छ । निराशै निराशामा बाँच्ने, अविश्वासको खाडल बनाएर असीमित चाहनाहरूको चाङ लगाएर दौडिने हो भने दुःख पाइन्छ । क्षणिक उमङ्ग र लामो समय निराशामा बाँच्ने जीवन कस्तो होला ? हरेकका इच्छा, आकांक्षाहरू फरक छन् । हेर्ने र बुझ्ने क्षमता पनि फरकफरक छन् । जीवनलाई कसरी भोग्ने, कसरी चलाउने, त्यो तपाईंंको कुरा हो । अहिले खर्बौं मानिस विश्व मानव इतिहासमा छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अब त पैसा नभई केही गर्न सकिँदैन नि ? एक जनाले निर्वाचन जित्नका लागि करोडौं खर्च गर्ने र पदमा पुगेपछि असुल गरेको देखिएको छ । राजनीतिमा देखिएको विसंगतिलाई के भन्नुहुन्छ नि ?
न्यूनतम आर्थिक पक्ष हो । यो सहयोगी पक्ष मात्रै हो । मूल कुरा त व्यक्ति, विचार, जनताप्रतिको विश्वास आर्जनको कुरा हो । अयोध्याको फौजले रामले लंका जितेका होइनन् । बुद्ध दरबारमै बसेको बुद्धत्व प्राप्त हुन्नथ्यो । सबभन्दा धनी मान्छेले नै जनताको मन जित्छन् भन्ने त छैन । धनमार्फत जित्न खोज्ने क्षणिक भएर जान्छन् । नेपालको इतिहास हेर्नुस् । पैसाले नै हुने भए राणा शासन, राजतन्त्र ढल्थे होलान् र ? एक कालको नेता सर्वकालिक हुँदैन । समय र जनताको भावनालाई बुझ्न नसक्ने अल्पकालिक भएर गए ।
तपाईंंको कार्यानुभवको कुरा पनि गरौं । पहिलो कार्यकालमा पाएको प्रशंसा, चर्चा वा तपाईंप्रतिको विश्वास दोस्रो कार्यकालमा घट्यो । यस्तो किन भयो होला ?
मैले नराम्रो केही गरेको छैन । पहिलो पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण थियो । पहिलो मन्त्रित्वकालमा मलाई क्वार्टरमै सिध्याइदिन्छु भन्दै धम्की आउँथ्यो । डीभी, पीआरधारी कर्मचारी रोक्ने मेरो त्यो बेलाको कामलाई धेरैले रुचाए पनि मेरो विरोध गर्ने र मलाई सिध्याउने त्यति बेला पनि थिए । मैले राष्ट्रको पक्षमा जोखिम मोलेको हो । मैले अहिले गरेको कामलाई महत्त्व दिइएन । लामो समय केन्द्रीकृत रूपमा रहेको व्यवस्थालाई संघीय मोडलमा लैजाने जिम्मा पाएको मन्त्रालयमा मैले कसरी काम गरें हुँला ? तपाईंहरूले अनुमान गर्न सक्नु हुन्न । लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधीहरूले मलाई असहयोग गरे । लोकतन्त्र गणतन्त्र समृद्धिको बाटोमा छ । तीन तहको संघीय प्रणालीमा मुलुक चलिरहेको छ । मेरो मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक काम सुरु गरेको हो । केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीयतामा जान नचाहेको पक्ष, लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रको बीचमा काम गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । संविधानले तोकेअनुसार ऐन बनाएर कर्मचारी समायोजनको काम गर्नुपर्ने थियो । यो काम सहज र सरल थिएन तर मानिसहरूले यो देखेनन् ।
नेपाली समाजले अलि फण्डा र स्टन्ट रुचाउने भएर पनि होला, यसपालि तपाईंंको कार्यकाल त्यति चर्चामा आएन वा तपाईंले काम देखाउन सक्नु भएन । सुरुमा वातावरणमन्त्री हुँदा ठूला होटेललाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो । पछि संघीय मामिलामन्त्री हुँदा पनि तपाईंंकै कर्मचारी उल्टै कारबाही गर्ने धम्की दिन्थे ।
वातावरणमन्त्री हुँदा मापदण्डविपरीतका होटललाई कारबाही सुरु गरेकै हुँ । तर, एक महिनामै मन्त्रालय परिवर्तन भयो । एक महिनाभित्र गरेको कुन कुरा गलत थियो त ? अर्को कुरा, संघीयता जटिल विषय हो । तपाईंले देख्नुभएको छ, संघीयताका कारण देश टुक्रिएको पनि छ । मूलभूत कुराहरू एक वर्षभित्र गरेको छु । सफ्टवेयरको विकास, ऐन, कर्मचारी समायोजन, संगठन संरचना र दरबन्दीका काम एक वर्षभित्रै सकेको हुँ । यो मेरो काम होइन र ?
बेलाबेलामा मन्त्री फेर्ने हल्लाले पनि काम गर्न नसक्नु भाको हो कि ?
१५ महिना अगाडिदेखि नै कहिले रेड जोन परेको भनेर आउँछ । कहिले ‘होइन, एलो जोनमा’ भनेर समाचार आउँछ । यसले गतिलाई कमजोेर बनाइहाल्छ नि । संसदीय प्रणालीमा जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहनु हुन्न, त्यो कुरा हुँदैन । मन्त्रीले गति लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले रुचाउनु भएन भने मन्त्रीको केही चल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीबाट तपाईंलाई सहयोग भएन, होइन ?
प्रधानमन्त्री प्रणाली हो, जे गर्नुभयो, जस्तो गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ । अब आउनेले गर्लान् नि । परिणाम त आउनुपर्‍यो नि । म मन्त्रीबाट हटिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी काम भएको मन्त्रालयमा दोस्रो नम्बरमा संघीय मामिला मन्त्रालय परेको छ । सबैभन्दा कम काम भएको मन्त्रालय पनि छ, तर तिनै मन्त्री अहिले सफल मन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सही भयो । प्रधानमन्त्री र जनताको नजर फरक हो । प्रधानमन्त्रीले असफल देखे पनि जनताको नजरमा म सफल छु ।
उसो भए राम्रो गर्दागर्दै तपाईंलाई किन हटाइयो होला ?
खै, अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन । पहिले कार्यसम्पादनको कुरा गर्नुभएको थियो । यो पनि गलत सावित भइसक्यो । किनभने कार्यसम्पादनमा काम गर्ने मन्त्रालय र मन्त्री भनेर दुई नम्बरमा म छु । प्रधानमन्त्रीले के सोचेर गर्नुभयो, उहाँले जान्ने कुरा हो । मलाई केही भन्नु छैन ।
मन्त्री हुँदा आफूलाई हटाइने हल्ला चल्दा कस्तो हुँदोरहेछ ?
प्रशासनिक रूपमा धेरै गाह्रो कुरा हो । व्यक्तिगत रूपमा मैले यस्ता धेरै सामना गरेको हुनाले मलाई केही भएन ।
मन्त्री फेरिने कुराले प्रशासनिक रूपमा कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्छन् ?
स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी शक्तिका पूजक हुन्छन् । मन्त्री फेर्ने हल्लासँगै कर्मचारीको व्यवहार पनि फेरिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्नेबारे तपाईंसँग केही कुरा गर्नुभएको थियो ?
व्यक्तिगत केही कुुरा भएन । क्याबिनेटमा म भोलि केही मन्त्री चेन्ज गर्दैछु भन्नुभएको थियो ।
मन्त्रीबाट हटाइएको कसरी थाहा पाउनुभयो ?
त्यो दिन साढे ११ बजे कलाकार केदार घिमिरेजीले मेरी छोरीलाई एसएमस गरेर जानकारी गराउनुभएको रहेछ । छोरीले मलाई भनिन् । त्यसलगत्तै मैले केदारजीलगायतलाई डेरा खोजिदिन आग्रह पनि गरें । मेरो तनाव देखेर दीपकराज गिरीले आफ्नो छोरीको घरमा एक महिना बसेर बिस्तारै कोठा खोज्दा हुन्छ भनेर खबर पनि पठाउनुभएको थियो ।
तपाईंलाई कुनै जानकारी थियो ? केही संकेत पाउनुभएको थियो कि तपाईं मन्त्रीबाट हटाइँदै हुनुहुन्छ भनेर ?
मन्त्री हुने बेला पनि मलाई चासो थिएन । हटाउने बेला झन् कसरी थाहा होस् ? म आफ्नै काम गर्दै थिएँ । कसलाई राख्ने कसलाई फाल्ने भन्ने सबै प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो ।
अनि त्यस्तो मन्त्रिमण्डमा जान किन यस्तो मरिहत्ते हुन्छ त ? जहाँ प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा केही गर्न पनि पाइँदैन । कुन बेला पद जान्छ, थाहा पनि हुँदैन । काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो पनि थाहा हुँदैन । प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने यो पद्धतिमा मन्त्रीको त खासै केही नचल्ने रहेछ त ?
त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । मन्त्री हुन किन मरिहत्ते गर्छन् ? उनीहरूले भन्ने कुरा हो । मलाई त मन्त्री हुने विषयले खासै उत्साहित पनि बनाएन ।
प्रधानमन्त्रीसँग कत्तिको समन्वय भयो ?
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको भन्दा सचिवको समन्वय बढी हुन्छ । सचिवले भन्दा मन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सात महिनासम्म पनि समय पाइनँ ।
मन्त्रिपरिषद सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न यति मुश्किल हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको घेरा त्यति कडा हुन्छ ?
त्यो त मलाई थाहा भएन । प्रधानमन्त्रीसँग सिधै पनि एप्रोच हुन्छ । कहिलेकाहीँ सचिवालयसँग पनि समय लिइन्छ । हुन्छ फोन गर्छौं भन्नुहन्छ तर फोन आउँदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सात महिना पर्खने भए पनि काम कसरी भइरहेको हुन्छ ? मन्त्रालयगत समन्वय कसरी हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ । प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने, को आवश्यक को अनावश्यक भन्ने कुरा उहाँ बुझ्नुहोला । मलाई भेट्न चाहनु भएन होला ।
आमरूपमा हेर्दा त मन्त्रीकै नचल्ने रहेछ । जनताले त काम भएन, मन्त्रीले गरेनन् भन्ने गरेको टिप्पणी गलत हो उसो भए ?
कति चल्छ कति चल्दैन । कति ठाउँमा कानुनले छेक्छन्, कति ठाउँमा अदृश्य शक्तिले रोक्छन् ।
तपाईंले सात/सात महिनामसम्म भेट्न नपाउने, तपाईंको प्रगति रिपोर्ट केही नहेर्ने, तपाईंले काम गर्न खोज्दा रोक्न खोज्ने, अनि यस्तो अवस्थामा मन्त्री हुन जान हुन्छ त ?
मन्त्री हुन चाहनेको लाइन सानो छ र ? कसैले म मन्त्री बन्दिनँ भनेको सुन्नुभएको छ ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १३, २०७६, १४:४६:००